merolagani - गरिब र मध्यम वर्गलाई झन् गरिब बनाइरहेकाे झुठबारे ज्ञान दिने 'फेकः फेक मनि, फेक टिचर्स, फेक एसेट्स' काे पुस्तक सारंश भाग २
Oct 21, 2020 07:04 PM Merolagani
हरेक बुधबार अर्थसँग सम्बन्धित पुस्तकहरुको सारंश प्रस्तुत गर्ने क्रममा गत सातादेखि हामीले फेकः फेक मनि, फेक टिचर्स, फेक एसेट्स पुस्तक सारंशकाे पहिलाे भाग प्रस्तुत गरेका थियाैँ। यस पुस्तकलाई रोबर्ट काओसाकीले लेखेका हुन्। शुरु गरौँ पुस्तक सारंशको दाेस्राे भागः
अधिकांश मानिसहरुका लागि उनीहरुको एसेट्सले उनीहरुको खल्तीबाट पैसा लगिरहेको हुन्छ। अहिले, तीन प्रकारका आधुनिक पैसाहरु छन्। ती हुन्ः
भगवानको पैसाः सुन र चाँदी
सरकारको पैसाः डलर, यूरो, पेसो, आदि
आम मानिसको पैसाः बिटक्वाइन, इथेरम, जिपक्वाइन आदि
अध्याय २ः हामी भगवानमा विश्वास गर्छौँः तपाईको विश्वास कसले जित्यो?
हरेक फेक पेपर यूएस डलर हामी देख्न सक्छौँः हामी भगवानमा विश्वास गर्छौँ।
हामीलाई किन भगवानमाथि विश्वास गर्न भनिएको छ? भगवानको पैसा, सुन र चाँदीलाई के भयो? सुनको एटोमिक नम्बर ७९ हो। चाँदीको ४७। पृथ्वीको उत्पत्तीदेखि नै सुन र चाँदी यहाँ उपलब्ध छन्। र अन्त्यसम्ममा पनि रहिरहन्छ।
ग्रेसम्स ल मा लेखिएको छः जब फेक मनि सिस्टममा प्रवेश गर्छ, रियल मनि लुक्न थाल्छ।
यस चार्टलाई हेरौँ
अब यो चार्ट हेरौँ जहाँ जब नेताहरु धेरै फेक मनि प्रिन्ट हुन्छ तब फेक मनिलाइ के हुन्छ भन्ने देखाइएको छ।
के इतिहास आफैलाई दोहो¥याइरहेको छ?
यो चित्र सन् १९२३ मा सडकमा बिलियनऔँ फेक पैसासँग खेलिरहेको एक जर्मन बालकको चित्र हो। पहिलो विश्व युद्धपछि वेइमर रिपब्लीकमा मुद्रास्फिती यति थियो कि १ अमेरिकी डलर बराबर ४.२ मिलियन डिएम पुग्यो।
तलको चार्टले दोखाउँछ कि त्यस बालकसँग पैसा कहाँबाट आयो भनेर।
माथि दिइएको फ्रेड चार्टले देखाउँछ कि सन् २००८ को क्र्यासपछि अमेरिकाले त्रिलियनऔँ फेक मनि प्रिन्ट गर्यो।
सन् १९०२ मा जर्मनमा भएको घटना र यस घटनामा केही समानता महसुस गर्नुभयो?
तर दुःखको कुरा यो हो कि मानव इतिहासमा कहिल्यै पनि फेक मनिले जितेन। अनौठो कुरा यो हो कि आजको सबै कागज पैसा यसको वास्तविक मूल्यमा फर्किनेछः शून्य। जब कुरा तपाइको पैसाको आउँछ, के तपाई, ‘भगवानमा विश्वास’ गर्नुहुुन्छ?
विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको अध्ययनमा फर्काउनुहोस्
बकमिन्सटर ‘बकि’ फुल्लर, ‘विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र पार्दै उसको पढाई फिर्ता गर्ने’ विषयमा लेखेका छन् – विद्यार्थीहरुलाई स्कुलबाट बाहिर निकाल्ने र तिनीहरुलाई पढाईमा फर्काउनु।
फुल्लर भनिरहेका थिए कि विश्व अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने अदृश्य व्यक्तिहरुले हाम्रा विद्यालयहरुमा उत्तम र तीक्ष्ण व्यक्तिहरु खोज्छन् ताकि उनीहरु ती विद्यार्थीहरुलाई आफुले चाहेको तरिकाले विश्व अर्थतन्त्र चलाउनका लागि प्रशिक्षण दिन सकोस्।